दशैं आयो, खै पिङ, खै चङ्गा , कोरोना ले लग्यो ! - ParyatanBazar.com
दशैं आयो, खै पिङ, खै चङ्गा , कोरोना ले लग्यो !
कात्तिक ५, काठमाडौं ।ढकमक्क सयपत्री र मखमली फूल फुल्न थालेपछि लाग्छ दसैँ नजिकिँदै छ । बालबच्चा ले हातमा चङ्गा बोकेर बाटोमा कुद्दै , आकासमा चङ्गाहरु उडाएको रोमाञ्चक दृश्य देख्दा लाग्छ दशैं आयो ।
घर–आँगन सफा सुग्घर गरेपछि, घरमा रङ लगाएर चिटिक्क बनाएपछि शहर पसेका छोराछोरी र विदेशिएका परदेशी हरु गाउँघर फर्किए सँगै बल्ल दशैं आएको भान हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन दसैँ को रौनक त तव सुरु हुन्छ जव गाउँ गाउँ मा पिङ हाल्न थालिन्छ । लिङ्गे पिङ पनि दशैंसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । पिङ खासमा मनोरञ्जनकै लागि खेलिन्छ । वर्षमा एक दिन धर्ती छाड्नुपर्छ भन्ने पुरातन मान्यताले पनि धेरैलाई पिङ खेल्नका लागि प्रेरित गर्छ । दशैंमा रमाउने बाहानामध्ये पिङ एक उत्कृष्ट तरिका पनि हो ।
त्यस्तै चङ्गाले मौसमी अवस्थाबारे पनि जानकारी दिन्छ । चङ्गा उडाउनु भनेको खुला र मोहक मौसमको सूचक हो । चङ्गा उडाउन मन्द हावाको बहाव चाहिन्छ । विजय र वर्चश्वको बोझ लिएर उड्ने चंगा एक रोमाञ्चक खेल मात्र होइन, जीवन दर्शन पनि हो । यसले आकाश छुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
तर यसपाली न आकाशमा चङ्गा उडेको छ , न ठाउँ ठाउँमा पिङ नै हालिएको छ । कोरोना महामारी नेपालमा तिब्रता का साथ फैलिए सँगै यसले दशैंलाई पनि नराम्रै सँग प्रभाव पारेको छ । अहिले न केटा केटी खुशी छन् न युवा युवती न त वृद्ध वृद्धा नै । पिङ खेल्दा निस्कने हाँसो को खित्का यसपाली खासै गुञ्जिने छैनन । न त चङ्गा उडाउँदा को उमङ्ग नै यसपाली देख्न पाइने छ ।
कोरोना महामारी थप नफैलियोस भन्ने उद्देश्यका साथ पिङ नहाल्ने धेरै ले निर्णय गरेका छन।
त्यस्तै खानेकुरा पचाउन पिङ खेल्ने गरिएको पनि बुढापाका को मुख बाट सुन्न पाइन्छ । यो तर्क यसकारण सही लाग्छ कि, पिङमा मच्चिने क्रममा शरीरको सम्पूर्ण व्यायाम हुन्छ ।
सम्पन्न भयो ५ दिने अनलाइन पत्रकारिता तालिम